RASMI: Jadwalka kulamada furitaanka horyaalka La Liga xilli ciyaareedka cusub ee 2019-2020 oo la shaaciyey – Yey ku bilaabanayaan Barcelona iyo Real Madrid? – Gool FM
(Madrid) 04 Luulyo 2019. Xiriirka kubadda cagta dalka Spain ayaa maanta soo saaray isku aadka Jadwalka kulamada horyaalka La Liga xilli ciyaareedka cusub ee 2019-2020, iyadoo haatan la ogaaday koox waliba kulanka ay furan doonto.
Afar ka mid ah kooxaha horyaalka La Liga ayaa dalbaday inay kulamada furitaanka ku bilowdaan meel aan ahayn garoonkooda, maadaama ay garoomadooda shaqo ka socoto, iyadoo kooxahaas ay ka mid ah tahay Real Madrid.
Macallin Zidane ayaa xilli ciyaareedkiisa cusub ee Real Madrid horyaalka La LIga ku bilaaban doona kulan ay marti u noqon doonaan naadiga Celta Vigo, Hazard iyo xiddigaha cusub ee Los Blancos ayaa kulankooda ugu horreeya horyaalka La Liga ka hor tagi doona Celta Vigo.
Kooxda Barcelona oo kulan adag gacanta loo geliyey bilowga xilli ciyaareedka cusub ee 2019-20 ayaa dhankooda ku furan doona horyaalka La Liga kulan ay booqan doonaan naadiga Athletic Bilbao.
Barcelona ayaana difaacashadeeda horyaalka ka bilaabi doonta xilli ciyaareedka cusub kulan ay marti u noqon doonaan Athletic Bilbao.
Naadiga Atletico Madrid ee Real Madrid kala dhisan caasimadda Spain ayaa ku furan doonta horyaalka La Liga xilli ciyaareedka cusub kulan ay Getafe ku soo dhoweyn doonaan garoonka ay lacagaha badan ku dhistay ee Wanda.
Haddaba halkaan hoose ka eeg kulammada maalinta koowaad ee furitaanka horyaalka La Liga xilli ciyaareedka cusub 2019-2020, kuwaasoo la ciyaari doono 18 bisha Agoosto 2019:-
Madrid vs. Getafe
RASMI: Kooxda Juventus oo xaqiijisay inta uu gaarsiisan yahay qandaraaska uu maanta qalinka ugu duugay Gianluigi Buffon